Home » AirTies » AirTies Air 4920 Smart Mesh Manual
AirTies Air 4920 Smart Mesh Manual
Aprily 26, 2018 Aprily 27, 2018 9 Comments ao amin'ny AirTies Air 4920 Smart Mesh Manual
1 AirTies Air 4920 Smart Mesh Manual
1.1.1 Boky Torolàlana mifandraika
SETUP MORA: POINT ACCESS
1. Mametraha Air 4920 iray eo akaikin'ny router anao ary ampifandraiso ny roa amin'ny alalàn'ny Ethernet mihidy
2. Ampifandraiso amin'ireo fitaovana mavesatra ny fitaovana Air 4920 ary tsindrio ny switch switch.
3. Andraso mandra-pahatonga ny maitso 5 GHz sy 2.4 GHz ho maintso maintso Mety haharitra 3 minitra izany.
4. Ankehitriny, azonao atao ny mampifandray ireo fitaovana finday amin'ny tamba-jotra tsy misy tariby vaovao.
- Amin'ny mpanjifa tsirairay (oh: laptop, telefaona na takelaka),
mifandray amin'ny tamba-jotra amin'ny marika.
- Ampidiro ny teny miafin'ny tambajotra rehefa voatosika.
5. (Safidy) azonao atao ny manova ny anaran'ny tamba-jotra (SSID) sy ny teny miafin'ny tambajotram-pifandraisanao.
Ampifandraiso amin'ny tamba-jotrao, sokafy ny navigateur web ary kitiho ny "http: //air4920.local" amin'ny
bara adiresy. Midira ary mivezivezy amin'ny SETICK QUICK avy amin'ny pane ankavia. (Banga ny teny miafina fidirana default.)
ATAHORANA NY COVERAGE WiFi anao (MESH):
Fanomanana: Mampifandray ny Air 4920 vaovao
1. Ao amin'ny efitrano misy ny router, apetraho ny Air 4920 vaovao amin'ny halavirana manodidina ny telo
metatra miala ny fitaovana Air 4920 efa misy, mampifandray azy amin'ny lohan'ny ary miandry mandra-pahatongan'ny LED 5 GHz sy 2.4 GHz maintso (4 segondra ON, 4 segondra OFF). Mety haharitra 3 minitra izany.
2. 2.a Tsindrio ny bokotra WPS amin'ny Air 4920 efa misy (eo akaikin'ny router) mandritra ny 2 segondra ary
avy eo amin'ny Air 4920 vaovao mandritra ny 2 segondra (2.b).
Ny LED 5 GHz sy 2.4 GHz manomboka manaparitaka ary miditra ho azy ny fitaovana. Ity dingana ity dia mety maharitra dimy minitra. Ny fifandraisana dia napetraka indray mandeha ny Ny jiro dia manjelatra maintso (Ny LED 5 GHz dia hidina kely indray mandeha isaky ny 5 segondra).
Arahabaina, vitanao ny manamboatra ny fitaovanao vaovao. Ny mari-pahaizana momba ny tamba-jotra Air 4920 misy anao dia alamina ho azy amin'ny Air 4920 vaovao.
Fanamarihana: Raha tsy manazava ny maitso ao anatin'ny dimy minitra ny LED 5GHz.
avereno azafady ny dingana 2.
Mametraka ny Air 4920 ao amin'ny efitrano tianao
3. Ny Air 4920 vaovao dia azo esorina ankehitriny ary apetraka ao amin'ny efitrano tianao.
Hiorina ho azy ny fifandraisana. Ity dingana ity dia haharitra hatramin'ny telo minitra.
Fanamarihana: Raha 5 GHz LED dia tsy hanazava ny maitso (ny LED 5 GHz dia ho faty indray mandeha isaky ny indray mandeha
5 segondra) ao anatin'ny telo minitra, azafady mba jereo ny toko «Famahana olana» (pejy 5).
4. (Tsy voatery) Ankehitriny, azonao atao ny mampifandray ireo fitaovana tariby (amin'ity ohatra ity, ny Set-Top Box) amin'ny Air 4920 amin'ny fampiasana ny tariby ethernet (plug-mavo).
5. (Safidy) Afaka manampy Air 4920 fanampiny amin'ny tambajotrao ianao amin'ny famerenana ireo dingana manomboka amin'ny 1.
Fanatsarana ny fandrakofana tsy misy tariby
Raha te hanatsara ny fandrakofana tsy misy tariby amin'ny efitrano hafa ianao dia afaka manangana Air 4920 fanampiny. Azonao atao koa ny mampifandray ireo fitaovana amin'ny alàlan'ny Ethernet amin'ity Air 4920 ity (ohatra ny STB, solosaina na console lalao).
Fanatsarana ny elanelam-potoana
Raha lavitra loatra ny Air 4920 misy anao ilay toerana tianao, dia azonao atao ny mametraka Air 4920 fanampiny hahatratra azy.
Torohevitra hahombiazana tsara indrindra:
- Vonoy ny serivisy tsy misy tariby amin'ny modemanao.
- Alaviro ireo singa:
- loharano mety hisian'ny fitsabahana herinaratra. Ny fitaovana mety hiteraka fanelingelenana dia misy ny mpankafy valindrihana, ny rafitra fiarovana an-trano, ny mikraoba, ny PC, ary ny telefaona tsy misy tariby (handset sy base).
- Fitaovana vy lehibe sy zavatra. Ny zavatra lehibe sy ny velarana midadasika toa ny fitaratra, ny rindrina voaravaka, ny fitoeran-trondro, ny fitaratra, ny biriky ary ny rindrina vita amin'ny beton dia mety hampihena ny fambara tsy misy tariby koa.
- Loharano sy velaran'ny hafanana toy ny lafaoro sy ny efitranon'andro ary koa ny hazavan'ny masoandro mivantana na dia misy fampangatsiahana rivotra tsara aza.
- Ankoatra izany, tena tsara ny fahazoana famatsiana herinaratra tsy tapaka (UPSes) (na, farafaharatsiny, mpiaro onja) mba hiarovana ny Air 4920 sy ny fitaovana elektrika hafa (modem VDSL, router / vavahady, boaty ambony, TV, sns. ) avy amin'ny loza ateraky ny herinaratra. Ny tafio-drivotra herinaratra, ny fiakaran'ny herinaratra ary ny loza mety hitranga mifandraika amin'ny tariby herinaratra dia mety hiteraka fahasimbana lehibe amin'ny fitaovana elektrika. Ho fanampin'izay, na ny fanelingelenana 1 segondra amin'ny herinaratra aza dia mety hahatonga ny modem rehetra, ny mpanjifa tsy misy tariby, ny fahita lavitra, ny boaty set-top, sns. Na dia manomboka ho azy aza ny fitaovana dia afaka minitra maromaro vao hiverina amin'ny Internet ny rafitra rehetra ary hahafahanao mankafy ny serivisy miorina amin'ny Internet.
- Miverina any amin'ny toeran'ny orinasa:
Mba hamerenana ny singa amin'ny sehatry ny ozinina, tsindrio ny bokotra reset (amin'ny fisokafana kely ao aoriana) mandritra ny 10 segondra. Ny paperclip metaly (misy tendrony lava) na paompy mahery dia safidy tsara matetika amin'io asa io. Rehefa voaporofo ny fizotran'ny famerenana azy dia "shimmer" vonjimaika ireo LED eo aloha ary hiverina indray ilay singa (ao anatin'ny 3 minitra) mankany amin'ny toeran'ny orinasa.
- Raha ataonao manokana ny fikirakiran'ny tamba-jotra dia soraty eto azafady:
Anaran'ny tamba-jotra: ………………………………………………………………………
Teny miafin'ny tambajotra: …………………………………………………………………
Password miafina an'ny mpampiasa: ………………………………………………… ..
Ity vokatra ity dia mampiasa rindrambaiko novolavolain'ny vondrom-piarahamonina misokatra. Ny rindrambaiko toy izany dia manana fahazoan-dàlana ambanin'ny fehezanteny manokana azo ampiharina amin'io rindrambaiko manokana io (toa ny GPL, LGPL sns). Ny fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny fahazoan-dàlana sy ny fahazoan-dàlana azo ampiharina dia azo jerena ao amin'ny atin'ny mpampiasa ilay fitaovana. Amin'ny fampiasana an'ity vokatra ity dia ekenao fa efa nandinika ireo fehezan-dalàna momba ny fahazoan-dàlana ireo ianao ary manaiky ny hofehezin'izy ireo. Raha toa ka manome anao ny kaody loharano an'io rindrambaiko voalaza io ireo teny ireo, dia ho azo omena amin'ny alàlan'ny fangatahana avy amin'ny AirTies ilay kaody loharano Mba hahazoana kopian'ny kaody loharanom-pahalalana voalaza dia alefaso amin'ny alàlan'ny mailaka ny fangatahanao [email voaaro] na amin'ny alàlan'ny mailaka sifotra amin'i: AirTies Wireless Communication Gulbahar Mah. Avni Dilligil Sok. Tsia: 5 Celik Is Merkezi, Mecidiyeköy, 34394 ISTANBUL / Torkia AirTies dia handefa CD anao miaraka amin'ny kaody loharano nangatahana $ 9,99 miampy ny vidin'ny fandefasana. Raha mila pitsopitsony, mifandraisa [email voaaro]
Boky Torolàlana ho an'ny Micro Air Vibrating Mesh Neb -izer NE-U22V Micro Air Vibrating Mesh Nebulizer NE-U22V User Manual - Optimized ...
Kalarstein Wonderwall Air Art Smart User Manual Kalarstein Wonderwall Air Art Smart User Manual - Optimised PDF ...
Samsung Front Control Slide-in Electric Range miaraka amin'ny Smart Dial & Air Fry [NE63T8711SS] Boky Torolàlana ho an'ny mpampiasa NE63T8711SS Samsung Front Control Slide-in Electric Range miaraka amin'ny Smart Dial ...
Samsung Front Control Slide-in Gas Range miaraka amin'ny Smart Dial & Air Fry NX60T8711SS Oven Manual Manual Samsung Front Control Slide-in Gas Range miaraka amin'ny Smart Dial & ...
Samsung Front Control Slide-in Gas Range miaraka amin'ny Smart Dial & Air Fry NX60T8711SS Oven Manual Manual NX60T8711SS Samsung Front Control Slide-in Gas Range miaraka amin'ny Smart Dial ...
Boky torolàlana momba ny fanabeazana ny rivotra madio Breville LAP300 ny Boky torolàlana momba ny fanadiovana Smart AirTM - MANORA LAP300 BREVILLE ...
Aprily 26, 2018 Aprily 27, 2018 Posted inAirTiesTags: Air 4920, AirTies, mpampiasa mpampiasa
Novambra 16, 2018 amin'ny 12: 51 pm
Tsy afaka mahazo ny teny miafara hiditra amin'ny extender aho, araka ny voalaza ao amin'ny boky hoe lamba firakotra ny teny miafina, manandrana izany aho ary tsy nahazo ny fidirana, ary mitady ny teny miafina diff default ary tsy hitako tao fonosin'ny na ao amin'ny extender ny tenany.
Aprily 15, 2020 amin'ny 6: 54 am
tapaka ny bokotra fitsahako ka ahoana no fomba hampiatoako azy raha tsy eo ny bokotra? ......
ary tsy misy olona tonga manamboatra azy ao an-trano…
May 20, 2021 amin'ny 3: 18 pm
Azonao atao ny mamerina amin'ny laoniny ny bokotra WPS 10 segondra
Mary Buckman hoy:
Jona 25, 2020 amin'ny 7: 54 pm
tsy hividy an'ireny intsony aho! tsara izy ireo rehefa miasa tsara, fa rehefa any ambany dia tsy misy miantso vonjy dia nanandrana niantso ny isa rehetra hitako
Oktobra 16, 2020 amin'ny 6: 29 am
Azon'ny AirTies 4920 manitatra miasa amin'ny tamba-jotra miaraka amin'ny fanitarana AirTies 4921?
Kelvin Miller hoy:
Novambra 22, 2020 amin'ny 4: 16 pm
Manana unitie airty 2 aho. Tohatra miakatra iray ary ny singa lehibe mifandray amin'ny tohatra modem. Izaho manana ilay ao ambony rihana akaikin'ny vatan'afo ahy fa ilay goba dia hifandray amin'ilay tohatra iray midina ihany. Toa zavatra maromaro arakaraka ny toerana no mampifandray amin'ny tohatra ambany fa tsy ny tohatra iray ambony. Misy fomba iray hanerena ireto entana ireto hifandray amin'ny singa mihidy?
Andy Mulchek hoy:
Desambra 1, 2020 amin'ny 4: 02 am
Tsy manohana aho, fa ny fahazoako azy fa ny singa mifandraika amin'ilay modem dia mametraka ny tamba-jotra ary ampiasaina manerana ny trano. Ny singa fanampiny dia hampiroborobo ny signal, ary hanitatra ny tamba-jotra napetraka avy amin'ny singa voalohany. Noho izany, mifandray amin'ny tamba-jotra natsangana avy amin'ny singa voalohany ianao, ary ny singa fanampiny dia mampiakatra ny famantarana ho anao.
Aogositra 24, 2021 amin'ny 8: 05 am
Inona ny pin WPS an'ny AirTies Air 4920
Septambra 11, 2021 amin'ny 5: 34 am
Tsy mpitantana an'ity birao ity aho. Izany no nianarako androany. Nandritra ny roa taona dia nahomby aho tamin'ny fampiasana singa AirTies 4920 roa, izay novidiko ho fonosana roa (noho izany dia samy nanana ny anaran'ny wifi sy ny teny miafina napetraky ny orinasa izy roa). Mora ny fametrahana voalohany.
Androany aho dia nanampy vondrona fahatelo 4920. Talohan'ny nanombohako dia niasa ireo singa roa tany am-boalohany (ny bokotra 5 GHz dia miova isaky ny 5 segondra). Tao amin'ny solosainako, nahita ohatra iray momba an'io anarana wifi napetraka tao amin'ny orinasa io aho, ary afaka nifandray taminy tsy misy tariby tamin'ny fampiasana ny teny miafina napetraky ny orinasa. Azoko natao koa ny mifandray amin'ireo singa na tariby ethernet.
Amin'ity fotoana ity dia afaka mahita ny solosaina fahatelo ao anaty lisitry ny tambajotra wifi ihany koa ny solosainako, saingy tsy afaka nifandray taminy aho tamin'ny alàlan'ny anarany wifi sy teny miafina napetraky ny orinasa. BTW, amin'ny fotoana sasany, averiko ao amin'ny toeran'ny orinasa daholo ireo singa telo ireo amin'ny alàlan'ny fametahana taratasy amin'ny lavaka famerenam-baravarana akaikin'ny tadin'ny herinaratra, saingy mety ho ilay singa fahatelo novidiko "nampiasaina moramora" ihany izany.
Ny singa 4920 izay mifandray amin'ny alàlan'ny tariby ethernet amin'ny router, no tompony. Mba hampidirana ny singa fahatelo dia nampandehaniko tamin'ny 5 metatra miala ny master unit io. Tsy misy tariby ethernet mifamatotra amin'ilay singa fahatelo. Nanindry nandritra ny 2 segondra ny bokotra WPS tamin'ny master unit. Tsindrio avy eo tamin'ny bokotra fahatelo ny bokotra WPS nandritra ny 2 segondra. Niandry 3-5 minitra aho, ary nanomboka nibolisatra isaky ny 5 segondra ny bokotra 5 GHz roa (naharitra ela ny vondrona fahatelo). Amin'izay fotoana izay, ankehitriny miaraka amina singa telo mandeha mafy, ny solosainako dia tsy nahita afa-tsy ny anaran'ny wifi an'ny master unit (ilay mifandray amin'ny tariby amin'ny router).
Amin'ny fampiasana ny pejin-tranonkala admin-n'ny router-ko dia hitako fa ny router dia nahita ireo singa telo (samy manana adiresy IP samihafa). Ny fampiasana ny adiresy MAC aseho amin'ny pejy admin ny router sy eo amin'ny farany ambanin'ny master unit, dia fantatro ny adiresy IP an'ny master unit. Avy eo tao amin'ny solosainako, nampiditra an'io adiresy IP io tao anaty vakizoro vaovao aho, ary nahafahako nanova ny anarana wifi sy ny teny miafiko. Vita ianao (aza manandrana manova ny anarana wifi sy teny miafina amin'ireo singa roa hafa).
Ankehitriny, miaraka amin'ireo telo miasa ireo dia afaka mandeha mandehandeha miaraka amin'ireo fitaovako finday aho ary mifandray ho azy ireo miaraka amin'ilay mari-pamantarana mahery vaika izy ireo. Tena milay sy mahasoa. Enga anie mba nanao izany aho roa taona lasa izay.
Notazomiko foana ny wifi-n'ny router. Ho ahy dia tsy mahita fanelingelenana amin'izany aho, koa tazomiko ho toy ny lamosina io, sao sanatria miverina miverina any amin'ny wifi-n'ny router aho. BTW, amin'ny toe-javatra iainako, ny famantarana wifi avy amin'ireo singa telo rehetra dia mahery kokoa noho ny router, ary ny hafainganam-pandeha tsy misy tariby dia avo roa heny noho ny hafainganam-pandeha, ambony sy ambany.
Boky torolàlana an'ny tompona motera GARMIN Force Trolling Motor
Boky Torolàlana ho an'ny borosy nify elektronika SUPREME SMILE
Boky torolàlana momba ny hazavana mihantona amin'ny masoandro
Fanombohana Manual Manual Sensor Expander S-ADAPT-X5-10
Admin on Boky torolàlana momba ny toromarika Beurer FT 65
Carol on PHILIPS InnoSpire Essence Nebulizer Compressor Manual
BOB SMITH on Masterbuilt 30. Digital Electric Smoker User Manual
Cecil Gregory on Torolàlana momba ny FitPro Watch - FitPro Tonic avy amin'i Kounga
Susan Engledow on Boky torolàlana momba ny torolàlana ONN CD Boombox